Home Arimaha Bulshada Daawo:- Muqaal Baastoow: Mid ka mid ah halyeeyadii fanka ee waayuhu ka...
Daawo:- Muqaal Baastoow: Mid ka mid ah halyeeyadii fanka ee waayuhu ka hiilliyay Heesaheyga Heesta Buulo-burte ayaa ugu Jacelahay
Mid ka mid ah heesaha aan laga xiiso dhicin ee Soomaalida ayaa ah heesta Eeddo. Kontonkii sano ee la soo dhaafay waxay marba caan ka dhex noqoneysay jiilka markaas soo baxaya.
Heestaas waxaa ku luuqeeya fannaanka Soomaaliyeed ee Cabdullaahi Shariif Baastoow oo qaaday sanadkii 1976-kii, waqtigaas oo uu ahaa nin da’ yar fankana ku cusub.
Cabdullaahi wuxuu fanka ku biiray sanadkii 1975-kii, isaga oo qayb ka noqday tartan ay ka qayb gali jireen dadka leh hibada fanaannimada, kaas oo kuwa ku soo baxa ay noqon jireen fannaaniin laga xiiseeyo geyiga Soomaalida.
“Hees Gani la dhahaayo ayaan heesaha hirgalay ku galay,” ayuu yiri Baastoow. “Mar labaadkii ayaan haddana ku noqday, haddana birimo ayaan ku galay
Cabdullaahi waqtigaas kaddib heesaho aad u badan ayuu qaaday, balse isagu waxa uu aad u xiiseeyaa mid kamid ah heesahaas, oo lagu magacaabo Buulo-burte.
Baastoow ayaa yiri: “Heesahayga waxaan u jeclahay heesta Buulo-burte. Heestaan aad ayaan u jeclahay, reer buulaay aad ayaan u jeclahay, reer Buulo-burte waxay ku yimaadeen afar koostar, heestaas darteed.”
Baastoow wuxuu sanado badan ahaa fannaan heesihiisa la xiiseeyo, kuna nool caasimadda dalka ee Muqdisho,
Isaga iyo fannaaniintii kale ee xilligii dowladdii Kacaanka waxay la shaqeyn jireen wasaarado mushaar joogto ah siin jiray, taas oo ku xirneyd hadba kooxda ay ku jiraan. Qaar waxaa la siin jiray guryo ay bilaash ku degganaayeen ama ay milkiyaddiisa leeyihiin.
Balse wax walba ayaa isbeddelay markii uu billowday dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya sagaashameeyadii. Baastow waxaa ku adkaatay nolosha, markii ay burburtay dowladdii gacanta ku haysay. Wuxuu ka tahriibay dalka, si uu u raadiyo nolol dhaanta tii xilligaas ku qabsatay Muqdisho.
“Waxaan aaday Yemen anigoo aan rabin,” ayuu yiri Baastoow. “Nin baa igu qalqaaliyay. Afgooyaan iska joogay markaas. Baabuur la koraayaan arkay, baabuurkii ayaan iska koray. Cadanuu naga riday
Cabdullaahi wuxuu deggenaa waddanka Yemen muddo dhowr iyo soddon sano ah isagoo ku noolaa xero qaxooti oo dukaan yar uu ku lahaa.
Sanadkii 2016 ayuu ku soo laabtay waddanka isaga oo dagay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland, markii dambana wuxuu u jihaystay magaalada Muqdisho oo aan wareysigaan uga qaaday.
Muqdisho waa halkii uu ku barbaaray, fanka ka billaabay isaga oo wiil yar ah, fannaan la qadariyana ku noqday. Hase ahaatee, intii aan wareysanayay wuxuu dhowr mar dib u gocday xusuuso aan maskaxdiisa ka go’in oo ay dib ugu celiyeen waddooyinka, guryaha ku yaalla xaafadda uu ka deggen yahay Waaberi iyo wejiyo uu yaqaannay iyaga oo dhallinyaro ah ay ugu dambeysay tobannaan sano ka hor.
Wuxuu yiri: “Noloshii hore waxay ahayd maasha Allaah, murtaax ayaan haysanay.”
Baastoow wuxuu hadda kaligiis ku nool yahay guri ku yaalla degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho, wuxuuna la nool yahay xusuusihiisii hore
Previous articleVladimir Putin: Madaxweynaha Ruushka ma wuxuu isticmaalaa qof u eg?
Next articleDAAWO:- MUQAAL XASAASI AH! “Fahad Yaasiin waa danbiile, balse agaasime Mahad Salaad waan in uu dib u habeyn ku sameeyaan NISA” Garyaqaan sare Dr.Mukhtar Nuur.